Daraasad Cusub:Maydhashada Subaxda Hore oo Kor u Qaada Hal-abuurnimada. | Boorama Online Network
Daraasad Cusub:Maydhashada Subaxda Hore oo Kor u Qaada Hal-abuurnimada.
Qof kastaba wuxuu iska leeyahay waqti uu jecel yahay inuu jidhka maydho, gaar ahaan inta u dhexaysa subaxnimada iyo habeenkii, laakiin daraasad cusub ayaa dibadda soo dhigtay in waqtiga qofku maydho ay saamayn ku leedahay maskaxda habka ay u shaqayso maalintaas.
Waxa daraasaddu ogaatay in maydhashada aroornimada hore ay cariso maskaxdu in noqot mid hal-abuur leh, isla markaana ka madhan isu buuq, taasina waxay keentaa in qofku shaqada si fiican u qabto, halka habeenkii amma fiidnimada oo la maydhaana ka caawiso inuu xilli hore seexdo.
Dr. Shelley Carson oo cilmi-nafsiga ka dhigta Jaamacadda Harvard ee dalka Maraykanka, ayaa sheegtay in maydhashada aroornimada hore qofka ka caawiso in aannu dareemin isku buuq inta uu shaqada ku jiro amma noqdo qof hal-abuur leh.
“Maydhashadu waxay keenta in qofku degenaansho dareemo. Sidoo kale, waxa u qofku dareema soo jeed iyo feejignaan, gaar ahaan haddii aad aroornimada hore maydhato waxa aad noqonaysa mid hal-abuurnimo la yimaada. Maskaxdu waxay dareemaysa degenaansho, dib isu cusboonaysii iyo in ay dib shaqo u bilawdo, waxa aad keenaysaa fikrado iyo xalal dedaal lagu gaadho,” ayey tidhi Dr. Shalley oo u warramaysay wargeyska NZ Harland.
Maydhashada habeennimo waxay qaboojisaa heer-kulka jidhka, taasina waxay qofka u saamaxdaa inuu si fudud u seexdo.
“Degdeg jidhku u qaboobo marka uu qofku sidaa maydhashada uga soo baxo waxa uu qofka u noqda mid jidhkiisa dejiya, waana habka ugu fiican ee qofku hadduu hurdo doonayo u seexan karo,” ayuu yidhi Christopher Winter oo ka tirsan Akamadiga Maraykanka ee Daawaynta Hurdada (American Academy of Sleep Medicine).